Tantara: Miditra ao Amin’ny Eﬁtrano Mihidy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Jereo ny sary. Miseho ao amin’ilay eﬁtrano mihitsy i Jesosy, na dia mihidy aza ny varavarana. Endrey ny hafalian’ny mpianatra! Moa ve tsy andro nampihetsi-po izany? Azonao isaina ve ny isan’ny fotoana nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy hatramin’izao? Manisa indimy ve ianao?
Tsy teo amin’izy ireo ny apostoly Tomasy rehefa niseho i Jesosy. Koa hoy ny mpianatra taminy: ‘Nahita ny Tompo izahay!’ Nefa nilaza i Tomasy fa mila ny mahita an’i Jesosy ny tenany vao afaka mino izany. Eny, valo andro tatỳ aoriana dia tafaraka indray tao amin’ny eﬁtrano iray mihidy ny mpianatra, ary teo i Tomasy tamin’izay. Tampoka teo dia niseho tao amin’ilay eﬁtrano i Jesosy. Nino amin’izay i Tomasy.